Famandrihana - Tsarabika
Azonao atao avy hatrany ny manao famandrihana ireo entana manaraka ireto. Fahatongavan'ny entana 35 hatramin'ny 40...
Azonao atao avy hatrany ny manao famandrihana ireo entana manaraka ireto. Fahatongavan'ny entana 35 hatramin'ny 40 andro
Deco pen Electrique
Fanaingona mofo mamy na sakafo hafa mila asiana haingo manokana. Mandeha amin'ny herin'aratra izy ity, ary tena mora ampiasaina, toy ny manoratra min'ny penina, na ny fandokona ihany. Ahavitana haingo mahavarina .
Fitoerana borosy nify sy "dentifrice", mety raha atao ao amin'ny trano fidiovana. Miendrika boty kely, vita avy amin'ny platika mafy tsara, ary mahazaka hamadoana, efa misy fitoerana "dentifrice" miaraka aminy.
Haingo fanao amin'ny volo, ho an'ny vehivavy. Misy karazany maromaro amin'ny lokony isankarazany. Manaingo ny volo indrindra ireo lavalava volo.
Mikotrana kely 5 minitra isan'andro, miaraka amin'ity fitaovana ity. Mahazo tsara avokoa na ny kibo, na ny ranjo na ny fe. Natao indrindra ity fitaovana ity ho an'izay te-hitaiza vatana, indrindra fa ny vehivavy. Tena mafy ary tsy mora simba.
Famataran'nadro miendrika lapoaly, hafa indray. Mba manana fomba hafa indray isika hijerena ny ora miaraka main'izy ity. Afaka ahantona amin'ny rindrindra, ary tena mety ra atao amin'ny hefitra fisakafoana.
Fikarakarana tongolo gasy, ity fitaovana ity dia ampiasaina raha hikarakara tongolo gasy, indrindra ny fitotona, na ny fipetserana azy. Vita avy amin'ny Vy matevina tsara izy, ary tsy mety arafesina, na dia sasana amin'ny rano tsotra aza, mora kely ny mampiasa azy.
Ouvre boîte à ailette
Fitaovana manamora ny fanokafana boaty, tena ilaina indrindra raha somary sahirana ianao manokatra "boite" vita amin'ny Vy. Mafy tsara izy, tsy mba mora tapaka, ary ny tahony ihany koa dia manamora ny fandraisana azy. Tsy mora arafesina ihany koa.
Amin'ny endriny hafa indray ity "moule" ity, miendrika vonikazo na "fleur" mantsy ny zavatra vita avy aminy rehefa vita. Toy ireo "moule silicone" rehetra ihany, izay mahazaka hafanana tsara, tsy mampiraikitra sakafo, ary mora diovina.
"Moule" fanaovana "cake" misy endriny maro tonga dia miaraka amin'ny 1. Natao indrindra izy ity ho an'ireo izay mbola manana zazakely, satria dia mahafinaritra ny endriky ny sakafo vita avy eo. Tena mahazaka hafanana ary mora diovina ihany koa.
"Moule" fanaovana "cake" vita amin'ny "silicone" malefaka tsara, ary tsy miraikitra ny zavatra atao ao anatiny. Mahazaka hafanana ihany koa, ary mora diovina.